नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको ४०औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकारले केसीको जीवनरक्षा लागि पहल गरेको तर तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्नेहरुले मरोस् भन्ने चाहेको टिप्पणी गरे ।
डा. केसीका विषयमा धेरै नबोल्ने भन्दै उनले उनको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वय गर्ने सरकारको भएकाले जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याइएको स्पष्ट पारे । ‘उहाँको जीवन रक्षा गर्ने पहिलो कर्तव्य हो सरकारको, अन्तिम सयमसम्म पनि सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षामा पहिलो प्राथमिकता, उहाँसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नलाई सँगसँगै महत्व दिएर जाने निर्णय गरिसकेका छौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्नेहरु गोविन्द केसीको हत्या गर्न चाहान्छन्, त्यो लासको राजनीति गर्न चाहेको भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले केसीको जीवन रक्षा गर्न खोज्दा अर्को पक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले केसीको हत्या गर्न खोजेको बताए । ‘सरकार बचाउन खोज्दैछ तर नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसीको हत्या गर्न खोज्दैछ । नेपाली कांग्रेसले ज्यान लिन खोजेको के हो ?’, उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर तर्न खोजेको हो ? कांग्रेस यति कमजोर र निम्छरो भइसकेको हो ? कांग्रेसको आफ्नो एजेन्डा नभएपछि तोडफोडमा उत्रिन खोजेको हो ?
यही तरिकाले अघि बढेमा कांग्रेस अब चाँडै सक्किने पनि उनले दाबी गरे । ‘यही शैलीमा अघि बढे कांग्रेस अब सिद्धियो, कांग्रेसको अवसानको बाटो हो यो’, उनले भने, ‘एउटा मान्छेको मागलाई हुबहु मान्ने हो भने संसद र सरकार किन चाहियो ? अनशन बस्न लगाइदिऊँ, उसको माग पुरा गरिदिऊँ अनि विधिको शासन चाहिँ नचाहिने हो ?’ दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र संसद भएका बेला बाहिरबाट समाधान खोजिनु गलत हुने उनले बताए । ‘संसद बाहिरबाट खोजिनु गलत हो । संसदभित्रबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’, प्रचण्डले भने ।
सरकारले केसीको माग सम्बोधन र जीवन रक्षाका लागि वार्ता टोली बनाएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘म आम नेपाली जतालाई पनि भन्न चाहान्छु यो के विडम्बना हो ? सरकारले समस्या समाधान गर्न वार्ता टोली बनाएको छ । सरकारले लडेर उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरेको छ, फेरि सरकारैमाथि आरोपै आरोप, पार्टीमाथि आरोपै आरोप ! यो के चिज हो ?
केसीले नेपालमा पहिलो पटक अनसन नबसेको र लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भएका बेला सबैभन्दा धेरै बसेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे । कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका प्रचण्डले त्यो बेला माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस के हेरेर बसेको थियो ? भनि प्रश्न गरे ।।